Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड - बच्चाहरु को लागि हेडलाइट्स बच्चाहरु जन्मदिन उपहार आर सी कार संग 2.4Ghz उच्च गति रक क्रलर सवारी साधन - RC कार लागि बच्चाहरु KOOWHEEL रिमोट कन्ट्रोल कार 360 Rotating 4WD बन्द रोड डबल Rotating टम्बलिङ पक्षीय
2.4Ghz उच्च गति रक क्रलर सवारी साधन बच्चाहरु को लागि हेडलाइट्स बच्चाहरु जन्मदिन उपहार आर सी कार संग - RC कार लागि बच्चाहरु KOOWHEEL रिमोट कन्ट्रोल कार 360 Rotating 4WD बन्द रोड डबल Rotating टम्बलिङ पक्षीय
1.High गति र बन्द सडक: कार, 4WD दुई शक्तिशाली मोटर्स छ आफ्नो उच्च गति सुनिश्चित गर्नुहोस्। धेरै पाङ्ग्रा लचिलो, यो द्रुत पालैपालो गर्न सजिलो छ।
बच्चाहरु को लागि 2.Best उपहार: 2.4GHz रेडियो रिमोट नियन्त्रण प्रणाली संग, आर सी कार सिद्ध जन्मदिन, छोराछोरीलाई लागि क्रिसमस उपहार हो।
चाल को 3.All प्रकार: अचम्मको 360 डिग्री स्टन्ट उल्टाउँदै डिजाइन, आफ्नो बच्चाहरु वा खेलौना कार प्रेमी लागि उपयुक्त। डबल पक्ष चलिरहेको, अगाडी, पछाडि, टर्न दाँया, 360 डिग्री टम्बलिङ उल्टाउँदै बारी बाँकी। RC कार बस कुनै कुरा यो के हिट जाँदै भइरहनेछ वा यसलाई कसरी भूमि, तपाईं फरक सुन्दर अनुभव दिन!
4.High गुणस्तर सामाग्री: उच्च गुणस्तर प्लास्टिक, दृढ र टिकाउ कार शरीर, थप ruggedness र crashworthiness। टायर, रबर को छन् कुनै पनि बाहिरी अवस्था हटाउन सजिलो।
5.Guarantee: कार, 3.7V 400mAh rechargeable ब्याट्री (समावेश) USB केबल (समावेश) संग प्रयोग 15 - 20 समय प्ले मिनेट,2घण्टा समय चार्ज। KOOWHEEL पूर्ण फिर्ती प्रदान गर्न वा 30 दिन भित्र अर्डर लागि नयाँ आदान प्रदान। 24 मा प्रतिक्रिया गर्न तयार अब गाडी थप्न hours.So!
अघिल्लो: वयस्क र बच्चाहरु को लागि2rechargeable ब्याट्री 2.4GHz रेडियो रिमोट कन्ट्रोल ट्रक दानव उच्च गति क्रलर युएसबी चार्जर आर सी कार संग आर सी कार KOOWHEEL 1:16 स्केल 2WD बन्द रोड रिमोट कन्ट्रोल कार (नीलो)
उत्पादन परिचय (UPC): 6958210300936
2.4G REMOTE CONTROL कार
2.4 GHz रेडियो नियन्त्रण: बलियो विरोधी हस्तक्षेप, जो एउटै समय र ठाउँमा भेला रेसिंग गर्न धेरै कार सक्षम गर्नुहोस्। तपाईं2थप KOOWHEEL RC ट्रक प्राप्त गर्नुभयो भने, यो पक्ष धेरै कार पक्ष चलाउन धेरै रमाइलो छ।
पूर्ण समारोह नियन्त्रण, अगाडी / बायाँ / दायाँ उल्ट्याउन /। यो रिमोट नियन्त्रण कार अत्यधिक स्थिर स्टीयरिंग र भल्ब छ, को Ergonomic रिमोट शुरुवात लागि उच्च नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न सक्छ।
ब्याट्री छोटो-ड्राइभिङ-पटक तल3कारण: द चार्ज समय मिलान समर्थन गर्न पनि छोटो छ।
तपाईं चार्ज अघि ब्याट्री सकिएको थिएन।
तपाईं प्रयोग पछि कार देखि ब्याट्री हटाइएको छैन यदि ब्याट्री जीवन छोटो हुनेछ।
रिमोट कन्ट्रोल X1
कार X2 लागि rechargeable 6.4V / 700mAh ब्याट्री
युएसबी चार्जर X1
HD 720 P FPV क्यामेरा
ब्याट्री जीवन: बारेमा 15mins
नियन्त्रण दूरी: 100 फिट
रफ्तार: 15 किमि / एच
कार ब्याट्री: 3.6V 600mA ब्याट्री
ब्याट्री रिमोट नियन्त्रण:2* 1.5V एए ब्याट्री ( समावेश)
कार्य: घुमाउनुहोस् बाँया, दाँया, अगाडि, बारी फिर्ता
16.1 X 11 एक्स 3.9 इन्च: प्याकेज आयाम
नेट वजन: 1.1 पाउण्ड
सेवा र वारेन्टी:
12 महिना प्रतिस्थापन ग्यारेन्टी लागि मर्मत जीवनकालमा।